Kulanka xalay dhexmaray Gabon iyo Cameroon ayaa ahaa mid xiiso badan, iyadoo dalka tartanka martigelinayay uu ku rajo weynaa in uu u gudbo rubux dhammaadka.
Tababaraha kooxda Arsenal, Arsene Wenger ayaa sheegay in uu "ka qoomamoonayo" in uu riixay Anthony Taylor oo ahaa kalkaaliyaha afraad ee garsooraha ciyaartii ay sida layaabka leh uga badiyeen Burnley.
Maqal Goolhaye Jaylaani oo BBCda uga warramay waayihiisii ciyaaraha
Goolhayihii hore ee xulka kubadda cagta ee Soomaaliya, Jeylaani Khaliif Maxamed oo haatan da`a ah, kuna nool duleedka magaalaa Afgooye ayaa ka warbixiyay ciyaarihii barisamaadkii.
Dawladda Masar ayaa liiska dadka argagixisada ah ku dartay Maxamed Aboutrika oo ah ciyaar yahan hore oo caan ah.
Louis van Gaal oo tababarenimada ka fariistay
Tababarihii hore ee kooxda Manchester United iyo xulka qaranka Netherlands, Louis van Gaal, ayaa sheegay in uu ka fariistay shaqada tababarenimada ka dib 26 sano oo uu kusoo jiray.
Burkina Faso iyo Cameroon oo isku garab dhacay
Xulka kubadda cagta ee dalka Burkina Faso ayaa barbardhac 1-1 la galay xulka kubadda cagta ee waddanka Cameroon, ciyaartii la dheelay maalintii furitaanka Koobka Qaramada Afrika ee 2017-ka.
15 Jannaayo 2017
Tartanka Koobka Qaramada Afrika oo billowday
Dalka Gabon waxaa ka billowday tartanka Koobka Qaramada Afrika oo ah tartanka ugu weyn qaarada Africa.
Chelsea oo Mourinho iyo shaqaalihiisii siisay £8.3m
In la eryo tababarihii hore ee kooxda Chelsea, Jose Mourinho iyo howlwadeenadiisii waxa ay kooxda Chelsea ugu kacday qarash gaaraya £8.3m.
Maqal Horyaalka koobaad ee Puntland oo wareegii labaad galay
Puntland waxaa ka socdo tartanka heerka koobaad ee kubadda cagta. Waxa ka qeybgalaya sagaal kooxood oo gobollada ka soo kala jeeda.
Maqal Muqdisho oo meelaha jirdhiska ay ku soo badanaayo
Magaalada Muqdisho Horumaro Kala Duwan ayey Hiigsanaysaa Gaar ahaan dhanka Ganacsiga, Waana arrinta qasabtay in Caasimada ay yimaadaan Dad leh Hal Abuur ganacsi oo Dalka ku cusub.
Muqdisho oo meelaha jirdhiska ay ku soo badanaayo
Ishak Belfodil oo la filayo inuu ku biiro Everton
Kooxda Everton ayaa oggolaatay in lacag dhan 10.4 milyan oo Pound-ka Britain ah, ay kooxda Standard Liege ee dalka Belgium ugala soo wareegto weeraryahan Ishak Belfodil oo u dhashay waddanka Algeria.
Maqal Dhageyso: Soomaaliya sidee looga arkaa kordhinta kooxaha ka qeybgala koobka aduunka
Xiriirka Kubbadda Cagta aduunka ee FIFA ayaa shalay shaaciyay qorshe lagu ballaarinayo ka qayb galka tartanka koobka dunida, oo hadda ay ka qayb galaan 32 kooxood oo laga dhigi doono 48 kooxood.
Dhageyso: Soomaaliya sidee looga arkaa kordhinta kooxaha ka qeybgala koobka aduunka
Kooxaha ka qaybgala Koobka adduunka ayaa laga dhigay 48 dal halkii ay horay uga ahaayeen 32 sida ay go'aamisay Xiriirka Kubadda Cagta Aduunka ee Fifa.
Manchester United iyo Wigan Athletic oo koobka FA isku arki doona
Kooxda Manchester United oo haysta koobka FA Cup ayaa gurigeeda ku martigalin doonta Wigan Athletic oo isla koobkan ku guulaysatay sanadkii 2013kii.
Ronaldo oo noqday ciyaaryahanka ugu wanaagsan caalamka
Cristiano Ronaldo ayaa loo magacaabay inuu yahay ciyaaryahanka ugu wanaagsan caalamka, wuxuuna ku guuleystay abaalmarinta FIFA.
Riyad Mahrez oo ku guulaystay laacibka Afrika
Weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Leicester City iyo xulka Aljeeriya, Riyad Mahrez, ayaa ku guulaystay abaalmarinta Xiriirka Kubadda Cagta Afrika CAF ee ciyaaryahanka ugu wanaagsan qaaradda.
Antonio Conte oo sheegay in uu Tottenham ay ka mid tahay lixda kooxood ee Horyaalka isku haya
Labo gool oo uu madaxa ku dhaliyay Dele Alli ayaa Chelsea u horseeday guuldarradii u horaysay tan iyo bishii sagaalaad ee sanadkii hore, kooxda lagu naanayso Spurs ayaa iyaduna soo gashay kaalinta saddexaad iyada oo Chelsea ka hoosaysa 7 dhibcood.
Maqal Tartanka ciyaaraha fudud oo lagu soo gabagabeeyay Muqdisho
Magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey tartan ciyaaraha fudud ah oo ay ka qeyb qaadanayeen 250 ciyaartooy, Khadiijo Aadan Daahir waa guddoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee ciyaaraha fudud, Maxamed Cumar Baakaay ayey uga warrantay tartanka la soo gabagabeeyey.
Tartanka ciyaaraha fudud oo lagu soo gabagabeeyay Muqdisho
Arsene Wenger oo ka cawday jadwalka ciyaaraha
Tabobaraha kooxda Arsenal, Arsene Wenger ayaa rumaysan in jadwalka xilli ciyaareedkan uu yahay kii ugu xumaa ee soo mara muddo 20 sano ah.
Pep Guardiola oo xirfadda tababarenimada ka fariisanaya
Tababaraha kooxda Manchester City, Pep Guardiola ayaa sheegay inuu "ku dhowyahay dhammaadka" xirfadiisa tababarenimo.
DAAWO: Dibadbax ka dhan ah trump oo ka dhacay Mareykanka